Sii Sheegiddii Weynayd ee Ciise | Farriinta Kitaabka
Sii Sheegiddii Weynayd ee Ciise
Ciise wuxuu sii sheegay waxyaalo caddeyn doona imanshadiisa isagoo awoodda boqor leh iyo dhammaadka waqtiga dunidan
CIISE wuxuu joogay Buurta Saytuun oo wuxuu eegayay quruxda Yeruusaalem iyo macbudkeeda. Markaana afar ka mid ah rasuulladiisii ayaa keli ahaan uga waraystay waxyaalo uu horey ugu sheegay. Ciise wuxuu yiri in macbudka Yeruusaalem la baabbiʼin doono. Mar horena “dhammaadka wakhtiga dunidu” uga sheekeeyay. (Matayos 13:40, 49) Laakiin rasuulladii haddeertan waxay weyddiiyeen: “Calaamada imaatinkaaga iyo dhammaadka wakhtiga dunidu maxay ahaan doontaa?”—Matayos 24:3.
Ciise wuxuu ugu jawaabay waxyaalaha dhici doono intaanan Yeruusaalem la baabbiʼin. Haddaba taa keliya erayadiisu ku ma ekeen. Sii sheegiddiisa fulin caalami ah bay lahaan doontaa. Ciise wuxuu yiri in dhacdooyin iyo xaalado dunida isku mar ka dhici doonaan oo ay calaamad noqon doonaan. Calaamaddan kuwa dunida jooga bay u muujin doontaa imaatinka Ciise iyo in boqornimadiisa samada ka bilaabatay. Haddii si kale loo sheego calaamaddan waxay caddeyn doontaa in Yehowah Ilaah uu Ciise ka dhigay Boqorka Boqortooyada Masiixa la sii ballanqaaday. Oo waxay calaamaddani muujisaa in Boqortooyadu ay dhowaan tirtiri doonto sharka oo nabad binuʼaadanka oo dhan u keeni doonto. Waxyaaluhuu Ciise sii sheegay waxay tilmaami doonaan maalmaha ugu dambeeya ee nidaamkan. Nidaamkan waxaa ka tirsan diimaha, siyaasadda iyo bulshada imminka jira. Markaasna nidaam cusub baa bilaaban doono.
Ciise wuxuu sharxay waxyaalaha dunida ka dhici doono markuu samada Boqor ka noqdo. Wuxuu yiri in dagaallo, abaaro iyo dhulgariirro waaweyn dunida ka dhici doonaan oo meel kasta cudurro ka jiri doonaan. Dembiguna waa badan doonaa. Ciise xertiisa runta ah dunidoo dhan bay warka wanaagsan ee Boqortooyada Ilaahay ku wacdiyi doonaan. Waxyaalahan oo dhan dabadeed waxaa iman doona “dhib weyn” oo aan jirin tan iyo dunida bilowgeedii.—Matayos 24:21.
Sidee bay Ciise raacayaashiisa ku garan doonaan markay dhibtan weyn soo dhow dahay? Ciise wuxuu yiri: “Geedka berdaha ah masaal ka garta.” (Matayos 24:32) Markay caleemo ka soo baxaan geedka laamihiisa waxa la gartaa inuu xilli cusub imanayo. Sidoo kale markay waxyaaluhu Ciise sii sheegay oo dhan waqti kooban dhacaan waxay inoo tahay calaamad cad inuu dhammaadkii soo dhow yahay. Cidna ma oga maalinta iyo saacadda dhibta weyn. Aabbaha keliya baa og. Sidaa aawadeed Ciise xertiisa wuxuu ku sii adkeeyay erayadan: “Soo jeeda, waayo, ma ogidin wakhtigu goortuu yahay.”—Markos 13:33.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Matayos qaybaha 24 iyo 25; Markos qaybta 13; Luukos qaybta 21.
Rasuulladii Ciise maxay rabeen inay wax ka sii ogaadaan?
Micnaha calaamadduu Ciise sheegay maxay tahay oo maxaana ka koobnaa?
Digniintee buu Ciise xertiisii siiyay?
CALAAMADDA IMAATINKA MASIIXA
Ciise wuxuu sii sheegay calaamad muujin doonto inuu dhow yahay waqtiguu Ilaahay dunidan nidaamkeeda kharriban baabbiʼin doono. Ilaa Dagaalkii Kowaad ee Adduunka binuʼaadanka indhahooda waxay ku arkayeen calaamaduu Ciise sii sheegay. Waxyaalaha waaweyn oo ka dhacaya diimaha, siyaasadda iyo bulshada dunidan si degdeg ah oo la joojin karin bay ugu dambeyn doonaan dhammaadkii nidaamkan. Siday u badbaadaan Ciise raacayaashiisa wuxuu baray inay ‘soo jeedaan’ oo goʼansadaan inay Ilaahay ku taageeri doonaan xaaladda ka taagan sayidnimadiisa.—Luukos 21:36; Matayos 24:3-14.
Wadaag Wadaag Sii Sheegiddii Weynayd ee Ciise